10 Meelaha Ugu Fiican Duurjoogta Caalamka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Meelaha Ugu Fiican Duurjoogta Caalamka
Tilmaamaha Safarka Eco, Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareen safarka Shiinaha, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, safarka Europe
99% ee dadka duurjoogta ah waxay doortaan inay u safraan Afrika safar safari ah oo safari ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan soo xulnay 10 meelaha duurjoogta ugu fiican adduunka, Yurub ilaa Shiinaha, safarka yar, laakiin meelaha ugu xusuusta iyo gaarka ah.
1. Jiuzhaigou Shiinaha
Guri ilaa 40% noocyada xayawaanka duurjoogta ah, iyo xayawaanka Shiinaha, Dooxada Jiuzhaigou waa 4800 mitir oo dherer ah. Dooxada Jiuzhaigou waa mid ka mid ah 10 meelaha ugu wanaagsan duurjoogta adduunka oo leh a muuqaalka breathtaking iyo nidaamka deegaanka ee hodanka ah.
Dooxada Jiuzhaigou, waxaad heli doontaa fursad qaali ah oo aad ku aragto Panda weyn, panda cas, Sichuan takin, iyo daanyeerka sanka ka sanqadha. Kuwani waa wax yar oo ka mid ah xayawaanka kale ee dhifka ah ee ku nool dooxada Jiuzhaigou qarniyo badan. Noocyadan khatarta ku jira waxay ku nool yihiin aag biyo-dhacyo ah, harooyinka, buuraha nuuradda, iyo qaababka Krast, meel qurux badan oo qurux badan leh oo sare u qaadi doonta niyadaada iyo fasaxa duurjoogta oo heer cusub ah.
Aaway Dooxadii Jiuzhaigou Ee Shiinaha?
Dooxada quruxda badan ee Jiuzhaigou waxay ku taalaa gobolka Sichuan ee Shiinaha waxaana laga heli karaa Beijing ama Chengdu.
2. Meelaha Ugu Fiican Duurjoogta Caalamka: Shennongjia In Shiinaha
Si aad u aragto Daanyeerka Sichuan Snub-nosed uma baahnid inaad safar dheer aado maxaa yeelay daanyeerkan dhifka ah wuxuu ku nool yahay keymaha bartamaha Shiinaha. waa sax, Shennongjia Kaydinta Dabiiciga gobolka Hubei waxaa ku yaal daanyeer xun, cadaan cad, daruuro leh, shabeel caam ah, iyo orsada madow ee Aasiya.
Intaa waxaa dheer, Keydka Dabiiciga ee Shennongjia waa mid si muuqata u qurux badan oo leh buuro dhaadheer iyo wabiyo hoose. Laga bilaabo jiilaalka ilaa xagaaga, aragtiyada dabeecadda duurjoogta ayaa isbeddelay sanadka oo dhan, balan qaadaya khibrad kale markasta oo aad go aansato inaad booqato. Si kastaba ha ahaatee, waqtiga ugu fiican ee booqashada waa May ilaa September, waana inaad goosataa tigidhadaada.
Aaway Keydkii Dabiiciga ee Shennongjia ee Shiinaha?
Keydka Shennongjia wuxuu ku yaal bartamaha Shiinaha, waxaana ugu wanaagsan inaad saldhiggaaga duurjoogta ka sameysato magaalada Muyu.
3. Meelaha Ugu Fiican Duurjoogta Caalamka: Buurta Huangshan Shiinaha
Dhiirigelin ku socota abwaannada iyo qorayaasha, layaab ma leh in Buurta Huangshan ay tahay meel cajaa’ib duurjoog ah oo adduunka ah. Huangshan waxaa laga helaa aag cimilo-hoosaadyo ku yaal gobolka Anhui. Sidaa darteed, marka lagu daro gorgorka dhibcaha leh, iyo bisad duurjoogta Aasiya ah, dhirta iyo ubaxyada halkan ku yaal ayaa ah kuwa ugu jecel uguna khaaska badan dhammaan Shiinaha.
Xayawaanka duurjoogta ah ee dhifka ah’ deegaanku waa geedo geedo qadiim ah iyo qaab dhismeedka dhagaxa weyn, halkaas oo aad ka sare mari lahayd daruuraha. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad doorato mid ka mid ah 70 ugu sarreysa aagga si loo neefsado muuqaallo muuqaal ah keydka dabiiciga ah. Guntii iyo gunaanadkii, iyadoo inbadan la arko, waa inaad ballansataa 2-3 maalmo lama ilaawaan ah fasaxa duurjoogta ee Huangshan.
Aaway Buurta Huangshan ee keydka dabiiciga ee Shiinaha?
Buurta Huangshan waa 3 saacado ka fog Shanghai by tareenka-xawaaraha sare, ee gobolka Anhui.
4. Meelaha Ugu Fiican Duurjoogta Caalamka: Liguria loogu talagalay Dolphins In Italy
Liguria iyo Cinque Terre caan ku yihiin xeebta iyo magaalooyinka quruxda badan iyo muuqaalka leh. Haddii ay dhacdo inaadan ogeyn, Liguria sidoo kale waa meel aad u wanaagsan oo loogu talagalay nibiriga iyo dolphin daawashada. Laga bilaabo May ilaa September, waxaad ku tagi kartaa mid ka mid ah safarrada doonyaha badan ee Liguria ee raadinta ka dib xiisaha nolosha badda ee Talyaaniga.
Xeebaha quruxda badan iyo buuraha Cinque Terre waxaa ka buuxa dhulal qarsoon, iyo yaabka badda hoosteeda. Sidaas, doonta ama quusitaanka, iyo qoob-ka-ciyaarka, waxaad ka yaabi doontaa xayawaanka duurjoogta ah ee ku sugan Liguria. Fasaxa duurjoogta ee Liguria shaki la'aan waa mid kamid ah hababka ugu wanaagsan ee xagaaga lagu qaato.
5. Fasaxa Duurjoogta ee Pyrenees
Shimbiraha ugaadhsiga sida gorgorka Dahabka ah ee kor uga baxa madaxaaga, iyo jahwareerka iyo jiqda jidadka, Pyrenees waa meel kale oo qurux badan oo duurjoogta adduunka ah. Buuraha dhaadheer yaab leh, koofiyadaha barafka, iyo dabeecadda ubaxa, jardiinada Faransiiska ee loo yaqaan 'Pyrenees park' waa mid ka mid ah meelaha ugu badan ee Yurub lagu tago fasaxyada duurjoogta.
Sidaas, marka lagu daro socodka dheer ee Pyrenees-ka quruxda badan, waxaad aadi kartaa safar orso raad raac ah, ama shimbiraha ugaadhsiga ah ee sawir qaadista ah. In kasta oo Pyrenees Faransiisku yihiin meel caan ku ah fasaxa Yurub, aaggu waa baaxad weyn tahay inaadan ka walwalin safarleyda kale inay ka nixiyaan xayawaanka duurjoogta ah iyo kuwa qurxoon.
Waa Maxay Qaabka Ugu Wanaagsan Ee Lagu Gaadho Pyrenees-ka Faransiiska?
Qaadashada Eurostar ee London, ka dibna tareenka TGV ee ka yimaada Paris ama Lille ilaa Toulouse waa wadada ugu fiican ee loo maro Pyrenees.
6. Meelaha Ugu Fiican Duurjoogta Caalamka: Camargue In France
Keydka qaran ee Camargue ee Faransiiska ayaa laga abuuray gudaha 1972 oo waa a beerta nasashada ee la ilaaliyo. weli, lagoons iyo marshland waa dhulalka ugu ilaalinta badan Yurub, oo halkan waa hoyga 400 noocyada shimbiraha iyo tan weyn ee flamingo.
Halkan waxaad sidoo kale fursad u heli doontaa inaad ku lugeeysid webiga ugu weyn Yurub, Delta, oo raadso fardaha duurjoogta ah. Waxaa intaa dheer, some oo ka mid ah shimbiraha qaaska ah ee aad halkan ku arki karto waa kuwa loo yaqaan 'Purple Heron', Terns yar, iyo Gull madaxa-madow.
Waqtiga ugu fiican ee la tagaa waa xilliga xagaaga oo ay shimbiraha yimaadaan iyo fardaha cawlan.
Waa Maxay Qaabka Ugu Wanaagsan Ee Loogu Safro Camargue?
Tareen waad ka raaci kartaa Paris ilaa Nimes, Marseille, ama Arles, ka dibna baska.
7. Fisser Hofe Gudaha Austria
517 kiiloomitir duurjoogta, Fisser Hofe ee galbeedka Tyrol waa mid ka mid ah sirta Austria ee sifiican loo xafiday. Dad badani ma oga meeshan, laakiin halkan waxaad ka heli doontaa baro qurux badan oo loogu talagalay sawir qaadista duurjoogta.
Guga gudihiisa 'Fisser Hofe' wuxuu ku jiraa ubax, oo waxaa laga yaabaa inaad nasiib u yeelato inaad soo qabato balanbaalistii Apollo ee wacnayd. Waxaa laga yaabaa in, waxaad ku arki doontaa gorgor Madoow dusha sare, ama jahwareerka kale ee duurjoogta ah, ibex, iyo duurjoogta. Si kastaba ha ahaatee, habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo xayawaannadaas dhifka ah ayaa kor u kacaya buurta, si ay u 3000 mitir, mid ka mid ah jidadka badan ee Fisser Hofe.
Waa Maxay Qaabka Ugu Wanaagsan Ee Lagu Gaadho Fisser Hofe-ka Austria?
Waxaad ku safri kartaa tareenada OBB magaalooyinka waaweyn Austria ilaa Fiss magaalada Tyrol. Salzburg, Vienna, ama Innsbruck to Fiss tareenka OBB waa jidadka safarka tareenka ee caanka ah.
8. Meelaha Ugu Fiican Duurjoogta Caalamka: Duurjoogta Webiga Danube
Laga soo bilaabo Kaymaha Madoow ee Jarmalka, guud ahaan Yurub ilaa Romania, webiga Danube waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan duurjoogta adduunka. Sidaa darteed, oo ah ilo biyo iyo cunto badan, layaab ma leh in webiga Danube uu ka mid yahay meelaha ugu wanaagsan ee lagu ogaado noocyada halista ku jira.
Tusaale ahaan, kalluumeysatada yar ee reer Yurub waa mid ka mid ah kuwa aadka u wanaagsan 400 noocyada shimbiraha ee ku nool Wabiga Danube. Intaa waxaa dheer, in Zemplen Hills, iyo beerta qaran ee Aggtelek, waad daawan kartaa 73 noocyada naasleyda, sida dawaco cas iyo bakayle bunni ah.
9. Keydka Dabeecadda Merfelder Bruch ee Jarmalka
Hoyga ugu dambeeya ee fardo duurjoogta ah ee Yurub iyo mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan abid waa aragtida fardaha duurjoogta ah ee socda. Sidaa darteed, Hohe Mark park waa meesha loogu jecel yahay daawashada duurjoogta.
Intaa waxaa dheer, dhexdood howdka iyo dhulalka cagaaran, waxaad nasiib u yeelan kartaa inaad aragto quruxda badan ee Dulmen. Dulmen Pony waa nooc faras ah, ku nool Merfelder Bruch, magaalada fardaha duurka, ama Rhine-Westphalia. Merfelder Bruch waa goob lagu xanaaneeyo labada nooc ee faraska oo si xor ah ugu nool deegaanadooda dabiiciga ah.
Waa Maxay Habka Ugu Fiican Ee Loogu Safro Magaalada Merfelder Bruch?
Tareenka ka raacaya Ingiriiska ama meel kasta oo ka tirsan Jarmalka una socda Kolon iyo North Rhine-Westphalia. Markaa waxaad ku biiri kartaa dalxiis ama waxaad u kireysan kartaa baabuur Merfelder Bruch.
10. Meelaha Ugu Fiican Duurjoogta Caalamka: Ubaxa Wengen ee buuraha Switzerland
Dhamaan meelaha cajiibka ah ee ku yaal 10 meelaha ugu wanaagsan ee duurjoogta adduunka ayaa hoy u ah xayawaanka duurjoogta ah ee ku yar Yurub. Si kastaba ha ahaatee, Wengen waxay hoy u tahay xayawaanka duurjoogta ah oo la yaab leh waana janno cilmiga dhirta leh. Waxay ku taallaa Alps-ka Switzerland, aragtiyada halkan ka muuqda gebi ahaanba waa kuwo laga naxo, buuro baraf wata, dooxooyinka cagaaran ee cagaaran, biyo-dhacyo, iyo ubax ugu quruxda badnaa.
Bishii Luulyo balanbaalisada duurjoogta ah ayaa qurxiya naadirta Marwada Slipper Orchid, buun buuniyayaal, saxifrages, iyo ubaxyo kale oo qurux badan oo ku teedsan Eiger glacier. Ubaxyadan cajiibka ahi waxay ku koraan meelaha dhaadheer ee buuraha Switzerland, ilaa dooxada quruxda badan ee Lauterbrunnen. Sidaas, Diyaar u noqo inaad u kacdo daruuraha iyo cirka buluugga ah si aad u aragto cajaa'ibyadan dabiiciga ah.
Waa Maxay Qaabka Ugu Wanaagsan Ee Lagu Gaadho Wengen Bernese Oberland?
Tareen u raadi Lauterbrunnen dooxada, ka dibna tareen ilaa tuulada Wengen.
halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno qorsheynta safar aan la ilaawi karin mid, ama dhammaan 10 meelaha duurjoogta ugu fiican adduunka: guud ahaan Yurub ama Shiinaha tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada "10 Meelaha ugu Fiican Duurjoogta Adduun" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wildlife-destinations-world%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
amazingwildlifeholidaysworldwide xayawaan Bestnaturereservesineurope BestTravelDestinationsChina bestWildlifedestinationsinchina BestWildlifevacationsworldwide Goobaha Duurjoogta duurjoogta